Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » 8 n'ime 10 ndị America na -akwado akwụkwọ ikike ngafe ọgwụ mgbochi
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
81.8% nke ndị America nwere mmasị na paspọtụ ọgwụ mgbochi
Echiche nke paspọtụ ọgwụ mgbochi na -eto nke ukwuu na ewu ewu.
Nnyocha ahụ gụnyere mmadụ 997 n'ofe US ndị a jụrụ ajụjụ dị iche iche metụtara paspọtụ ọgwụ mgbochi ọrịa.
Baby Boomers bụ ndị kacha nwee ike ịkwado paspọtụ ọgwụ mgbochi ọrịa.
Onu ogugu 50.9% kwuru na ha nwere ike jiri akwụkwọ ikike ngafe ọgwụ mgbochi na -eme njem n'ime obodo.
Nsonaazụ nyocha nyocha ọgwụ mgbochi na nso nso a na-ekpughe mmetụta ndị America nwere maka mmachi njem dị iche iche metụtara ọrịa COVID-19.
N'arụmụka na -aga n'ihu na -emetụta nnwere onwe onwe onye na ike ịga njem na -enweghị nsogbu na mba ahụ, ọtụtụ kwenyere ugbu a na ịgba akaebe ịgba ọgwụ mgbochi kwesịrị ịbụ ihe achọrọ.
81.8% nke ndị America nyochara na -akwado echiche nke Paspọtụ Vaccine, ebe Baby Boomers bụ onye dịkarịsịrị nta na -akwado echiche a.
Nnyocha ahụ gosikwara ọgbọ nke nwere ike ghara ikwenye paspọtụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịas na mmetụta ma nwoke ma nwanyị ndị na -aza ajụjụ na -enwe maka okwu a.
Echiche nke paspọtụ ọgwụ mgbochi na -eto nke ukwuu na ewu ewu. Na New York City na akụkụ nke California ugbu a na -enye iwu maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, yana nnukwu ụlọ ọrụ dị ka ahịrị ụgbọ mmiri ndị Norway, ọ bụ ihe a na -apụghị izere ezere na obodo ndị ọzọ, steeti na ụlọ ọrụ ga -amalite ime otu ihe ahụ. Na agbanyeghị na ụfọdụ steeti dịka Florida na Texas amachibidoro akwụkwọ ikike ngafe ọgwụ mgbochi ọrịa, ọha mmadụ na -amalite ịmara echiche a.
Emere n'etiti June 2–3, nyocha ahụ gụnyere mmadụ 997 n'ofe US bụ ndị a jụrụ ajụjụ dị iche iche metụtara akwụkwọ ikike ngafe -kọwara dị ka "akwụkwọ na-egosi na agbaala gị ọgwụ mgbochi megide COVID-19." Ajụkwara ajụjụ gbasara mmasị mmachibido njem njem ọrịa na -efe efe, ụmụ amaala nyochara na -anọchite anya ọtụtụ igwe mmadụ gụnyere okike (nwoke/nwanyị), ọgbọ (Baby Boomers/Generation X/Millennials/Generation Z), yana ndị nke gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na ndị a na -emeghị ọgwụ mgbochi.
Ọtụtụ ndị zaghachirinụ maara okwu ahụ nke ọma ogwu paspọtụ, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 82% na -ekwupụta na ha na -akwado echiche ugbu a n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ. Nsonaazụ ndị a jikọtara ma afọ na okike, ebe ụmụ nwanyị nwere 7% nwere ike kwado paspọtụ ọgwụ mgbochi ọrịa karịa ụmụ nwoke. N'ime ndị a na -emeghị ọgwụ mgbochi, o yikarịrị ka ụmụ nwoke nwere ike gbaa ọgwụ mgbochi dabere na mmachi njem karịa ụmụ nwanyị.